[Beyond Fest 2020] Nyochaa: 'Onye iro' A Gritty Take On Superheroes and Former Glory - iHorror
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ [Beyond Fest 2020] Nyochaa: 'Onye Iro Kpọrọ' A Gritty Were On Superheroes and Former Glory
Akụkọ Ntụrụndụ ụjọOkpukpo Ugwu (thrillers)
[Beyond Fest 2020] Nyochaa: 'Onye Iro Kpọrọ' A Gritty Were On Superheroes and Former Glory
edere ya Jacob Davison October 17, 2020
Dika dike di iche iche gara aga aburula ebe obibi nke ihe nkiri sịnịma na omenaala, maka ma odi nma. N'ime ime nke a, maka isi franchises dị ka Ndị na-abọ ọbọ, Batman, Ududo-Man na ndi ozo, emeela ka ndi mmadu megharia otutu ihe ndi ozo. Mana ka enwere ọtụtụ akụkọ dị iche iche ị ga-akọ na ọtụtụ a ga-esi na ala kọọ, karịa igwe. Dị ka ọ bụrụ na onye dike tufuo ike ha? Gịnịzi ka ha na-eme? Nke a bụ ntọala-iji Onye Iro.
Max aka (Joe Manganiello, ezi Blood) bụ dike kachasị ike n'eluigwe na ala. Ma ọ dịkarịa ala, ọ bụ. Ugbu a, ọ bụ onye na-enweghị ebe obibi na onye aholicụrụma nke nwere ike ịnabata echiche dị ebube na nsogbu iwe. Okwute mgbidi brik na-achọ inwe ike ịkụtu ụlọ dịka ọ na-azọrọ na ọ nwere ike. Ọ nọ n'okpuru ọkwa na nnukwu obodo, onye na-a bartụ mmanya na-eme ya ihere ma mesoo ya dị ka ihe nhụjuanya ruo mgbe ọ ga-ezute onye dị njikere ige ya ntị n'ezie. Hamster (Skylan Brooks, Obi Miri Ike bụ onye nchịkwa vlogger na onye nta akụkọ na-achọ nnukwu scoop, ọ na-ahụ ohere ya na Max. Ọ bụ ezie na ọ nwere obi abụọ banyere akụkọ Max Fist nke akụkọ banyere nnukwu ndị dike na onye iro ya dị egwu site na mbara igwe, ha ga-eme ihe ntụrụndụ. Mana ọ ga-achọ enyemaka Max mgbe nwanne ya nwanyị Indigo (Zolee Griggs, Ụdị) na-etinye na Njikwa (Glenn Howerton, Ọ na-ada mgbe niile na Filadelfia) onye omekome obi ojoo nke choro Indigo na njide ya. Ugbu a ụmụnne ya ga-esonyere Max Fist ma chọpụta ma akụkọ ya ogologo ọ bụ eziokwu ma ọ bụ na ọ bụ onye nzuzu. Ma ọ bụ ma eleghị anya ha abụọ?
Onye Iro sitere n'aka onye edemede / onye nduzi Adam Egypt Mortimer, onye nyere anyị uche 2019 na ihe nkiri egwu Daniel abụghị ezigbo. Dị nnọọ ka ọrụ ikpeazụ ya, o meela ihe na-egosi na ọ na-akụ ọkpọ n'otu ụdị ma ọ bụ ụdị. Onye Iro bụ emereme mpụ nkiri, a psychological thriller, a ibu dike nkiri tụgharịrị na isi ya. Ma ọ nweghị ike ịbịa n'oge ka mma. Ọ bụ ezie na agaghị m ekwu na ndị mmadụ na-arịa ọrịa nke nnukwu ihe nkiri sịnịma, enwere ike ọgwụgwụ ụfọdụ sitere na oke akụkọ ha. Ma nke a sitere na ha. Eziokwu na aghụghọ nke Max Fist ka nọ na mbara igwe, yana ihe ngosi na ntụgharị nke ga-eme ka ndị na-ege ntị jụọ eziokwu nke nkwupụta ahụ siri ike. Ma ha agaghị enwe obi abụọ na ọ bụ igwe ọgụ.
Joe Manganiello na-enye hel nke arụmọrụ dị ka Max. Cheedị na Thor ma ọ bụ Superman nwere obi mgba na-alụ ọgụ na ikike ọ na-amaghị, nke ike. Ọbụna ma ọ bụrụ na ara na-agba gị, ị ga - enwe ike imere nwoke ahụ ọmịiko, ọbụlagodi na ọ na - akụ mgbidi brik na - eche ihe ọ bụla ma nwee ike iji aka nkịtị gbapu okpokoro isi mmadụ. Mana ọzọ, ọ nwere ike ịbụ naanị ọgwụ na mmanya niile dị na sistemụ ya. Skylan Brooks na Zolee Griggs kwụpụtara dị ka 'sidekicks' ya n'amaghị ama n'agbanyeghị na ha nwere ọgụgụ isi na nghọta karịa nke ndị ahụ mebiri emebi ga-abụ dike. Zolee dị ka Indigo na-egosi aghụghọ doro anya ma na-eche nche, ọbụlagodi mgbe nsogbu ahụ na-emegide ya ma ọ na-etinye ya n'ọnọdụ siri ike na egbe nkịtị na isi ya. Hamster bụ ezigbo ndị na-ege ntị na-ege ntị ma na-enye nkwado maka akụkọ Max Fist. Inye echiche banyere mbara igwe n’elu ihe omimi ya na mmekọrịta ya na ụwa kwa ụbọchị. Glenn Howerton na-enwu na-aga nke ọma dị ka onye isi nchịkwa. Gbakwunye ụfọdụ nkwụsị na oke mpụ dị oke egwu ma dịkwa mfe.
Foto site na Youtube
Ihe nkiri a na-eme ụjọ mgbe ọ bụla Max Fist na-apụ apụ. Ọ bụrụ na ọ bụ ọkpọkọ, egbe, ma ọ bụ naanị aka ya yiri ka ọ bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha, Max na-eme anụ ọ bụla na ụzọ ya. Karịsịa ma ọ bụrụ na mmanya na-egbu ya. A na-ejikwa ihe ndị Max na-eme na-ekwenye ekwenye na-ejikwa usoro dị iche iche mara mma na nke ndị na-eme ihe nkiri na-eme ihe nkiri. Max si malite bụ a na-atọ ọchị akwụkwọ ịke fantasy ụwa, n'ihi ya, ọ bụ naanị ihe ezi uche dị na ya na a na-egosi ha ya. Ọ na-emekwa ka ọdịiche dị mma dị n'etiti akụkụ sci-fi na eziokwu na-ada ụda ma na-adọrọ adọrọ Max hụrụ onwe ya ka ọ tọrọ atọ. Ugboro abụọ na-agbagọ ma na-atụgharị ọnụ, na-agagharị na ụdị ejiji mara mma ọ bụ ezie na oge ụfọdụ dọkpụrụ ntakịrị.
Enwere m ọgaranya inweta Onye Iro na Beyond Fest 2020 na Mission Tiki ụgbọala na-na ọ bụ a gbawara na a nnukwu ihuenyo. Ọzọkwa, ndị na-eme ihe nkiri na ndị ọrụ gụnyere Adam Egypt Mortimer na Joe Manganiello (Ya na nkịta ya, Bubbles!), Skylan Brooks, Zolee Griggs na ndị ọzọ gụnyere ndị na-emepụta si Spectrevision nọ na ụgbọ ala Legion M maka foto-ops na intros.
Foto E Si Nweta Lisa O'Connor: Director / Onye edemede Adam Egypt Mortimer, Joe Manganiello, Na-egosipụta nkịta ahụ na Elijah Wood
Onye Iro na-atọ ụtọ dị ka ọ na-akụda obi na ihu ọkpọ. Ọ bụ ezie na ndị mmadụ amabeghị aha "Max Fist", ha nwere olile anya na ha ga - etinye ego ka Hamster.
Onye Iro ka atọrọ ka ewepụtara ya na Disemba 11, 2020.
2020edinamAdam egipiptimimOnye IroKarịrị FestGlenn HowertonHorrorJoe manganielloReviewSci-fiSpectreVision
Jacob Davison bụ onye edemede na-atụ ụjọ na Los Angeles, Eye On Horror co-host, na onye hụrụ ihe niile n'anya. Ọ na-anakọta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọtụtụ fim ọ na-ele.
iHorror Nkiri Ememme 2020: Hụ ndepụta zuru oke nke ndị mmeri!
'GI Joe: Ọrụ Blackout' bụ ozi dara
Omuma, 'Zombies Riri ndị agbata obi m na-enweta ...
Chọọ Cateories Họrọ Atiya Amazon (nkiri) (7) Amazon (usoro) (9) AppleTV + (2) Rgbọ mmiri Blu (4) Egwuregwu egwu (46) Na-akpa ọchị (12) Facebook (usoro) (1) Akụkọ ifo (32) Ihe osise (26) Gore (23) HBO (ihe nkiri) (4) HBO (usoro) (7) Akwụkwọ ụjọ (44) Akụkọ Ntụrụndụ Na-adịghị Egwu (10,484) Ihe nkiri egwu (180) Usoro ụjọ (52) Horror Subgenres (8) Hulu (usoro) (4) Ajụjụ ọnụ (nkiri) (32) Ajụjụ ọnụ (usoro) (2) LGBTQ ụjọ (29) Ndepụta (ihe nkiri) (37) Nsuso (usoro) (2) Ahịa (19) Nnukwu anụ mmiri (9) Nyocha Nyocha (42) Ihe nkiri (11) Egwu (35) Netflix (nkiri) (16) Netflix (usoro) (20) Na-abụghị akụkọ ifo (3) Paranormal (75) Ọrịa na-atụ ụjọ (thrillers) (52) Usoro nyocha (7) Shudder (nkiri) (39) Shudder (usoro) (15) Ebube (4) Iche na nke a na-adịghị ahụkebe (35) Ihe nkiri na-asọ asọ (49) Usoro gụgharia (17) Mụaka (2) Ihe nkiri (nkiri) (138) Trailer (usoro) (32) Ezi Mpụ (41) Egwuregwu vidio (165) YouTube (nkiri) (3) YouTube (usoro) (11)